यसै त गर्मी, त्यसमाथि नम्रता मल्लको फोटोसुट ! – List Khabar
Home / मनोरंजन / यसै त गर्मी, त्यसमाथि नम्रता मल्लको फोटोसुट !
admin April 7, 2022 मनोरंजन Leaveacomment 334 Views
खेसरीलाल यादवकी नायिका नम्रता मल्ल अहिले इन्टरनेटमा निकै चर्चामा आएकी छिन् । ‘दो घुंट’ गीतको सफलतापछि जताततै नम्रताको नाम चलेको छ । अहिले अवस्था यस्तो छ कि मानिसहरु अभिनेत्रीको एक एक पोस्टको प्रतिक्षामा छन् । यदि तपाई साँच्चै नम्रताको पोस्टको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ भने तपाईको इच्छा पूरा भएको छ भन्ने बुझ्नुहोस् ।
केही दिनयता नम्रता मल्ल दुबईमा छुट्टी मनाउन व्यस्त छिन् । नम्रताले छुट्टी मनाउने क्रममा पल पल पल फ्यानसँग अपडेट सेयर गरिरहेकी छिन् । एकपटक फेरि अभिनेत्रीले दुबईबाट सुपर सिजलिंग फोटोहरू अपडेट गरेकी छिन्। तस्बिरमा नम्रता मल्लले कालो मोनोकिनीमा सुनौलो फ्रेमको कालो सनग्लास लगाएकी छिन् । जसमा उनको जोश पनि प्रष्ट देखिन्छ ।
नम्रताका तस्बिरमा उनी या त स्विमिङ पुलमा आराम गरिरहेकी छिन् वा समुद्रको छालको आनन्द लिइरहेको देखिन्छिन् । नम्रता मल्ल भोजपुरी इन्डस्ट्रीकी ग्ल्यामरस नायिका हुन्, जो आफ्नो स्टाइल र डान्सले नोरा फतेहीजस्ता अभिनेत्रीलाई कडा टक्कर दिने गर्छिन् ।
पछिल्लो तस्विरमा पनि नम्रताको अनुहारमा आत्मविश्वास देखिन्छ । तस्बिरसँगै नम्रताले कूल क्याप्सन पनि लेखेकी छिन् । उनी लेख्छिन् ‘यदि तपाई शक्तिशाली बन्न चाहनुहुन्छ भने आफैलाई शिक्षित गर्नुहोस्।
Previous हामीले पानी कति पिउने ? यो हो पानी पिउने सही तरिका
Next शरीरमा यी ८ कुरा देखिनु ठूला गडबडीको संकेत, तुरुन्तै डाक्टरकोमा जानुहोला